Ukwakha - ukuqeqesha imisipha yommandla osondeleyo kunye nomzimba wonke kumantombazana. Ngaba ufuna ukuba ngumthandi ofanelekileyo? Mfundisi izinto ezisemgangathweni zokugxeka-i-gymnastics, eya kukunceda ukuba ube nesimo senyama kwaye uyathandeka. Xa uphinde ukhalaza ngobomi bezocansi, u-intombi unomdla: kodwa awuzange uzame ukumisa imisipha? Akukho biceps, kodwa isondelene. Imvakalelo ebhedeni emva kokuba "isithethe senyama" ihlukahluka kakhulu ...
Kwenzeka njani, awuzange uve nantoni na malunga nesakhiwo - ukuqeqesha imisipha yommandla osondeleyo? Yintoni na?
Ilizwi elonwabisayo, likhumbuza kakhulu "ukwakha umzimba." Kwaye ngenye indlela ayengowomfazi. Ukwakha - ubunzima bokuqeqesha imisipha yommandla osondeleyo (i-vuma - i-muscle controls muscle). Isiphumo siphumelelwa ngeemimululusi ezizodwa. Zikhona ezinye iindlela eziza kunceda ukuhlakulela imisipha ebuhlungu. Ngokomzekelo, oko kuthiwa yi-Kegel umzimba okhuthaza imisipha yomgangatho weplavic. Ewe-ah ... Ubungcamango kwaye udonsa iikholomu yabadlali abaye baxhamla ubuso babo ngengqondo. Ngaphezulu kwazo zikhupha umqeqeshi onamandla, umphathi "Yenza kwakhona! Yenza ezimbini! ". Ngaba uyayifuna le nto?
Kutheni? Olu qeqesho luyimfuneko kwimpilo novuyo. Siyabonga ngemisebenzi ekhethekileyo ongayifunda ukulawula izihlunu zendawo esondeleyo. Ngokuqhelekileyo abalawulwa yiminqweno yakho, kodwa emva kokuqeqeshwa kanzima uya kufunda ukubandakanya ngqo indawo oyifunayo, unokuzicwangcisa i-tempo kunye nokunyaniseka kwakho. Utshintsho kumgangatho wesini unempembelelo enxulumene nolwalamano lwakho. Ngomthandi wakho, uya kuhlala uhlukile, kodwa uhlala unomdla. Unganqikazi: ukuqeqesha imisipha esondeleyo - ukuthintela ngakumbi utshintsho lweenguqu kunokuba ulawulo olukhuni. Ngexesha lobasebenzi, phantsi koxinzelelo, imisipha yakho ilula kancane. Kwaye umntu othandayo unokudanisa xa elala. Yaye uya kuba nomsindo kangakanani! Amanqaku achukumisayo ebhinqa, ayenokubandakanyeka ngentshiseko, emva kokubeleka kwakungekho ngaphandle kommandla woqhagamshelwano. Ukubuyisela ithoni ye-muscle, kufuneka uqeqeshwe, kwaye oku, kuya kuqinisa kwaye kukhawuleze uvuyo novelwano. Ukuzivocavoca kwakhona kukhulula abasetyhini kwiingxaki ezintle ezinxulumene nokuchama okungahambi kakuhle: izihlunu ezilawula le nkqubo ziyingxenye yeqela elithandanayo.
Kuphi? Kwizikolo, "geisha", ukulawulwa kwezihlunu zommandla osondelene nendawo inxalenye yokulungelelaniswa kolu bhinqa ngenxa yobundlobongela obunokwenyama, obunecala. Ezi zikolo zisekelwe kwizithethe zabafundisi bobufundisi baseThailand, iJapan ne-Taoist. Ngako-ke isangqa kwisitayela "saseMpumalanga", sigqoke iipasjama zesiTshayina, abaqeqeshi kunye neengqamlezo zeqhumiso. Kwi-gynecologist yezobuchwepheshe, unokufumana ulwazi malunga nokuzivocavoca kweKegel, ezijoliswe ekuqiniseni izihlunu ezisondeleyo. Ufunda ekhaya, kwaye i-gynecologist yakho ihlola iziphumo. Yonke into eyenzekayo kwindawo yezoshishino kwaye ibizwa ngokuba yimigqirha yonyango. Unokufunda ekhaya usebenzisa izifundo zevidiyo. Unokuphinda usebenze kunye neendidi ezizodwa zemimandla. Bakhonza ukuqinisa imisipha yommandla osondeleyo, umzekelo, iibhola ze-jade, ezithengiswa kwiintengiso zesini. Ezi zifundo zilungile kubantu abathobekileyo, banentloni-kungakhathaliseki ukuba akukho mntu akubona apha! Kwaye wenza into ebalulekileyo kuwe - ukwakha - ukuqeqesha imisipha yobomi obusondeleyo.
Ngomdla we-vanilla ... Ngaba ufuna ukuba intanda yakho ithande ulala embhedeni? Ngokuqhelekileyo uphatha i-ice cream yakhe ye-vanilla: iqukethe i-phosphorus kunye ne-calcium-izinto eziyimfuneko ukuba izicubu ze-muscle zisebenze kakuhle. I-Vanilla nayo inegalelo ekuziphatheni ngesondo ekhululekile kunye nolonwabo.
Ukutya kwehlobo: inkcazo, imenyu, ukuphononongwa kunye neziphumo
Udongeni lwesiSwidi kunye nokuzilolonga kulo
Izibonelelo kunye neHarms yeVivearianism
Iintlobo zamadoda apho ungafanele ulinde ukunyaniseka
Isibikezelo seenkwenkwezi ngo-2010 ngentombi
Isonka ngamantongomane nakumayini
Amazinyo afaneleka njani?
Indlela Yokucoca Iigcobo Ekhaya
Ukufunda ukwenza i-manicure ye-gradient nesiponji
IJuniper: ukufika, ukunakekelwa
Ziziphi iimfuno ezifunekayo kumntwana?